नेकपा विवाद बढ्दै जाँदा किन बोलाइयो मुख्यमन्त्रीहरुलाई काठमाडौं ? « Bikas Times
नेकपा विवाद बढ्दै जाँदा किन बोलाइयो मुख्यमन्त्रीहरुलाई काठमाडौं ?
नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चर्कदै गएपछि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई काठमाडौं बोलाइएको छ । आगामी बुधबार मुख्यमन्त्रीहरूको भेला आयोजना गर्ने नाममा मुख्यमन्त्रीहरुलाई काठमाडौं बोलाइएको हो । तर सरकारले मुख्यमन्त्रीको भेलामा काठमाडौ आएका मुख्यमन्त्रीहरु नेकपा भित्रको आफ्नो गुटको स्वार्थ पूरा गर्ने तर्फ लागेका छन् ।
काठमाडौं आइपुगेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, १ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गबीच प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्ने बारेमा कोटेश्वरस्थित मुख्यमन्त्री पोखरेलको निवासमा लामै छलफल भएको बताइएको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल भने स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै उनी काठमाडौ आएका छैनन् । दशैंअघि नै कोरोना संक्रमित भएर थप उपचारको लागि हेलिकोप्टरमा काठमाडौं ल्याइए पनि झण्डै डेढ महिनादेखि राजनीतिक वृत्तमा उनी हराएका छन् ।
उता कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु पनि यही मौकामा खुमलटारमा दुई दिनयता पनि दिनभरि भेटवार्ता गरेका छन् । खुमलटारमा सबैभन्दा पहिले मातृका यादवले र त्यसपछि जनार्दन शर्मा अनि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका छन् ।